Walt Disney Day မှာဖော်ပြချင်တဲ့ Top 10 Walt Disney ကာတွန်းကားများ - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » entertainment » Walt Disney Day မှာဖော်ပြချင်တဲ့ Top 10 Walt Disney ကာတွန်းကားများ
Walt Disney Day မှာဖော်ပြချင်တဲ့ Top 10 Walt Disney ကာတွန်းကားများ
Min Thuta | entertainment, Knowledge | December 3, 2018
ဒီနေ့ ကတော့ Walt Disney Day ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Walt Disney ဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့လို ကာတွန်းကား ကြိုက်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများသိကြမှာပါ။ ကဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းတို့ လဲ Walt Disney Day မှာကြည့်ဖို့အတွက် Walt Disney Company ရဲ့ Top 10 Walt Disney ကာတွန်းကတေလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်…
1937 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Snow White မင်းသမီးလေးကာတွန်းကားဟာဆိုရင် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 782,620,000 ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ Dialogue လေးကတော့ “Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1961 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီ Dalmatian ခွေးလေးတွေပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ကာတွန်းလေးကတော့ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ 717,405,900 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကာတွန်းလေးရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “My only true love, darling. I live for furs.”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
3. Fantasia (1941)
1941 ခုနှစ်ကထွက်ရှိ ဒေါ်လာ 596,252,200 ထိရရှိခဲ့ပြီး ကလေးတွေအရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ Mickey Mouse ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးပါဝင်တဲ့ဒီကားလေးရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “And now we’re going to hearapiece of music that tellsavery definite story.”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းနှစ်သက်ကျတဲ့ Simba ဆိုတဲ့တောဘုရင်ခြင်္သေ့လေးရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားလေး ဟာဆိုရင် ဝင်ငွေဒေါ်လာ 554,524,300 ထိရရှိခဲ့ပြီး ထင်ရှားတဲ့စကားလေးကတော့ “Look, boys! A king fit forameal!” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တောတွင်းသားလေးနဲ့ဝက်ဝံကြီးတွေတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီကာတွန်းလေးဟာမသိသူမရှိသလောက်ပါ။ “Man that’s what I callaswinging party.”ဆိုတာကတော့အဆိုပါ ကာတွန်းလေးရဲ့လူသိများတဲ့ Dialogue လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေဒေါ်လာ 529,021,800 အထိရ ရှိခဲ့ ပါတယ်။
စုန်းမရဲ့ကျိန်စာမိခံရတဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့သူမကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်သမီးလေးသုံးယောက်ပါဝင်တဲ့ဒီကာတွန်းကားလေးဟာလဲ ဝင်ငွေဒေါ်လာ 521,814,100 ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “Now sword of truth, fly swift and sure, that evil die and good endure!”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သနားဖို့ရောချစ်ဖို့ရောကောင်းတဲ့သစ်သာရုပ်လေး Pinocchio အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီ ကာတွန်းလေးဟာလဲ ကလေး လူကြီး ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကာတွန်လေးဖြစ်ပြီးလဝင်ငွေဒေါ်လာ 483,955,900ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “A boy who won’t be good, might just as well be made of wood.”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာသမင်လေး Bambi အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီကာတွန်းကားလေးဟာဆိုရင်လည်းဝင်ငွေဒေါ်လာ 457,455,400 ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “Eating greens isaspecial treat. It makes long ears and great big feet.” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
9. Finding Nemo (2003 – Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios)
ငါးလေး Nemo ကိုသူ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်တဲ့ဒီကာတွန်းကားလေး ဟာအောင်မြင်မှုအရမ်းရခဲ့တဲ့ ကားလေးပါ။ ဝင်ငွေဒေါ်လာ 404,503,100 ထိရရှိခဲ့ပြီး ထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့“I didn’t come this far to be breakfast.”ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွေးလေးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကြူးထားတဲ့ဒီကားလေးဟာလဲဝင်ငွေ ဒေါ်လာ 400,176,500 ထိရရှိခဲ့ပြီးထင်ရှားတဲ့ Dialogue လေးကတော့ “Whenababy moves in, the dog moves out.”ဖြစ်ပါတယ်။
Detox water နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားမယ်
by Min Thuta on February 1, 2019 -0Comments
Detox water ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုထုတ်ပေးပြီး အဆီလဲကျ အသားအရည်လဲလှစေရန်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ သဘာဝနည်းအတိုင်းအဆီကျ...
သင့်တော်မဲ့ Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
by Min Thuta on February 16, 2019 -0Comments
ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ မိမိနဲ့သင့်တော်မဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? မိမိဘဝအတွက် Career ဆိုတာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတွေးကိုတွေးထားမဲ့အရာတစ်ခု...
by Min Thuta on January 26, 2019 -0Comments
ယနေ့ခေတ်မှာ အသင့်စားအစားအစာတွေပေါများလာပြီး စားသုံးသူတွေအနေနှင့်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးဝယ်ရတာလွယ်ကူတာကြောင့် အသင့်စားအစားအစာတွေကို နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးနေ...
by Min Thuta on February 24, 2019 -0Comments
အလုပ်မှာရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်များဟာ လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေ အချိန်မှီမပြီးစီးတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပိုများပါတယ်။ Time Management အချိန်စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်တာတစ်ခုထ...
ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ?
by Min Thuta on February 10, 2019 -0Comments
ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အထူးသဖြင့်လိုအပ်တာကတော့ ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးဖို့ပါပဲ။ကလေးသူငယ်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်နေထိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါ...
I want to sell My LEXUS LX570 2017 MODEL April 8, 2019
Research Chemicals 2-FDCK 2-fdck 2fdck CAS 111982-50-4 withe powder April 8, 2019
Volvo XC60 LED DRL day time running lights driving daylight April 8, 2019
MG5Car stereo audio radio android GPS navigation camera March 22, 2019
Samsung galaxy Note9 128GB $350 March 22, 2019
Sony PlayStation4Pro 2th $250 March 22, 2019
Supply strongest 5F-MDMB-2201 5f-mdmb-2201 powder 5F-MDMB-2201 March 22, 2019
All times are GMT 6.5. The time now is 6:37 pm.